Ikhasi eliyinhloko > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Sanibonani nonke! Ngiyajabula ukuthi uye kwisiza sami ukuthola imininingwane. Ngokuzimisela nangokuzimisela, ngiqoqe zonke izindatshana, azange ngenze amaphutha noma amaphutha angenaphutha. Ngiyethemba ukuthi ulwazi olutholwe kulo mthombo luzoba wusizo kuwe!
Lesi siza silungele abantu abanesifo sikashukela nezihlobo zabo njengesisekelo semininingwane ekulweni nezifo zabo. Ngemuva kwakho konke, ngisho nokuhlakanipha okuthandwayo kuthi: "Ukuqwashisa - kusho ukuhlome!". Lokhu kusho ukuthi umuntu onolwazi uzolwa futhi afunde ukuhlala nesifo sakhe, futhi lesi yisinyathelo sokuqala nesikhulu kunazo zonke ekululameni.
Ungathola lonke ulwazi oludingekayo oluzodingeka abanesifo sikashukela kuleli sayithi. Izihloko ezilandelayo zibhalwe lapha:
Isifo sikashukela kufanele sinake kakhulu ekudleni kwakhe, ngoba izinga le-glycemia lizoncika kokuqukethwe kwengxenye ye-carbohydrate ekudleni. Esizeni ungathola ukuthi - okwakhayo kodwa akunjalo - ukudla, ukudla, futhi uzothola nezindlela ezinhle zokupheka.
Isayithi lizokusiza ukuthi ukhethe i-glucometer futhi uqaphe kahle ushukela wegazi lakho, njengoba lokhu kuyinkomba yesimo somzimba ojwayelekile. Ukwelapha isifo sikashukela ngaphandle kokuqashwa njalo kwamazinga kashukela kuwukuzula ebumnyameni.
Njengoba isifo sikashukela ngaphandle kokwelashwa okwanele nokudla kugcwele izinkinga ezinzima, kuyadingeka ukwazi izimpawu nezindlela zokubhekana ne-concomitant pathology. Kepha kukhona olunye uhlangothi lwemali - lapho isifo sikashukela siyinkinga. Izifo ezifana nalezi azijwayelekile, futhi ukuvikela ngesikhathi kuzosiza ukugwema izinkinga ngendlela yokulimazeka kwe-carbohydrate metabolism.
Indawo ekhethekile esizeni sami ihlala sihloko esithi “Isifo sikashukela ezinganeni,” ngoba umzali ngamunye ubona impilo nenhlala-kahle yengane yakhe njengo-apula iso lakhe. Lesi siza siqukethe imininingwane ethembekile kakhulu nemibono enegunya lochwepheshe mayelana noshukela ezinganeni.
Ungahle ucabange ukuthi kunokuqukethwe okuningi kakhulu ukukhumbula konke futhi ulandele zonke izincomo. Kepha eqinisweni, ungahlala ubheka indawo ukuthola umbono, futhi imininingwane iyindlela esuka empilweni ejwayelekile, noma ngabe unesifo esibi njengesifo sikashukela.
Ngena ujule, ufunde, uvume ngekhanda, ufeze - khona-ke uzovuzwa ngempilo enhle kakhulu!
Yiba Nempilo! Ozithobayo, Umphathi weSayithi Snitko Irina.
Yimuphi udokotela okufanele ngithinte ushukela wegazi ophezulu kubantu abadala nasezinganeni?
Uma, ngokusho kwemiphumela yokuhlaziywa, kubhalwe izinga eliphezulu likashukela egazini, lapho-ke umeluleki ezoqokwa yedwa. Uma ngasizathu simbe lokhu kungenzekanga, kufanele ukwenze ngokwakho. I-endocrinologist izonquma ezinye izivivinyo ezingezekile.
Udokotela uzokwenza ukuhlolwa okubonakalayo futhi ahlole umlando. Kuyaqapheleka ukuthi indlela yokuthola isifo sikashukela enganeni nakumdala ingahluka. Okokuqala, izifo ezinezimpawu ezifanayo, kufaka phakathi isifo sikashukela, azikhishwa. Ngemuva kokuthi imiphumela yokuhlolwa itholakele, kuzokwazi ukwenza ukuxilongwa okuyikho.
Uma umuntu engazi ukuthi unesifo sikashukela, khona-ke lezi zimpawu ezilandelayo zingaba isizathu sokuxhumana nochwepheshe:
isisindo noma ukwehla kwesisindo,
Uma unalezi zimpawu, kufanele uqale uthintane nodokotela wakho. Uzobeka isivivinyo segazi kusuka emunweni wokuthola ushukela osheshayo. Uma izinsolo zesifo sikashukela ziqinisekisiwe, uchwepheshe okhethekile uzobandakanyeka ekuhlolweni okuqhubekayo.
Kubalulekile! Umelaphi akakwazi ukwelapha umuntu onesifo sikashukela, kodwa futhi kungasiza ukuthola isifo. Imvamisa abantu bathola lesi sifo ngesikhathi sokuhlolwa kokuvimbela, okunqunywa udokotela ojwayelekile.
Ngubani igama likadokotela wohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2?
Udokotela, obizwa ngokuthi yi-endocrinologist, ubandakanyeka emalungiselelweni ezokwelapha, ukuqapha kanye nokulungisa. Ngemuva kokutholakala nesifo sikashukela, umuntu uhambela udokotela njalo ukuze athole izeluleko. Ngaphezu kwalokho, odokotela abalandelayo bangabamba iqhaza ekwelashweni kwalesi sifo:
udokotela ohlinza imithambo
Abanye ochwepheshe abafanele belapha izinkinga zesifo sikashukela esivela ekwelashweni okungafanele noma abafuna usizo ngokungafanele.
Udokotela we-endocrinologist ukhetha ukwelashwa okuthandwa kakhulu. Ngohlobo 1 sikashukela, kunikezwa i-insulin therapy. Isifo sikashukela sohlobo 2 siphathwa ngezidakamizwa ezikhulisa ukuzwela kwezicubu esenzweni se-insulin futhi zithuthukise ukucasuka kwaso. Kubalulekile ekwelashweni ukudla okufanele nendlela yokuphila enempilo.
Ngaphezu kwalokho, ukuze welashwe ngempumelelo, umuntu kumele ngokuzimele afunde ukulawula lesi sifo. Uma kusetshenziswa i-insulin ukwelashwa, uzodinga ukuqapha ushukela wakho wegazi nge-glucometer. Isifo sikashukela kufanele sazi ukuthi sidinga malini ukuze siphuze ushukela ojwayelekile.
Akunakwenzeka ukwelapha ushukela ngokuphelele, ngakho-ke kuzodingeka wenze izenzo ezithile njalo. Kuyaqapheleka ukuthi ukutholwa kusenesikhathi kwe-pathology kukuvumela ukufezekisa ukuxolelwa kwesikhathi eside ngosizo lwezidakamizwa zethebhulethi. Umuthi wanamuhla unikeza izidakamizwa eziningi eziphumelela kakhulu. Kungenzeka ukwelapha konke ukubonakaliswa kwalesi sifo. Ezigabeni zakamuva, ukwelashwa kwe-insulin kuyadingeka. Zonke izibonakaliso zesifo kumele zichithwe ngokushesha.
Yikuphi uchwepheshe ophatha unyawo lwesifo sikashukela?
Uma ufuna ukuthola ukuthi yimuphi udokotela ohilelekile kwisifo sikashukela, uzodinga ukuxhumana nomtholampilo. Cishe ngaso sonke isikhathi, ukwenza irejimeni yokwelashwa ephumelelayo, usizo lwabachwepheshe abanochwepheshe abaningi luyadingeka.
Unyawo lwesifo sikashukela luyinkinga yesifo sikashukela, ebonakala ngomonakalo wezinzwa nemithambo yegazi. Njengoba i-pathology ikhula, izinqubo ze-necrotic kanye nezilonda zenzeka ezicutshini ezithambile. Uma i-glucose yegazi ingenziwa ngendlela ejwayelekile, i-pathology ingadala i-gangrene, okuwukuphela kwekhambi lakho okunqunywa.
Izinkinga zelashwa ngudokotela ogcina izidakamizwa nodokotela obizwa ngokuthi yi-podiatrist. Isazi se-endocrinologist sibhekene namazinga we-glucose ejwayelekile ngokunquma izidakamizwa ezikhethekile noma i-insulin. I-podiatrist yenza ukwelashwa ngqo kwizilonda zamaphethelo aphansi, ichaza ukwelashwa nama-antiseptic agents ekubuyiselweni phansi konyawo ngokushesha. Kuyaqapheleka ukuthi ngaphandle kokubeka ushukela ngokulandelana, akunakwenzeka ukuqeda izinkinga.
Ukulimala emaphethelweni kushukela kusongela impilo yomuntu. Njengomthetho, unyawo lwesifo sikashukela luvela cishe eminyakeni engama-7 000 ngemuva kokuqala kokukhula kwesifo. Ezimweni eziningi, lokhu kudalwa kwenzeka kubantu asebekhulile abanesifo sikashukela sohlobo 2. Iningi labanesifo sikashukela abanikezi ukunakwa okuyi-complication lapho sekuqala ukukhula. Lesi yisona sizathu esiyinhloko sokubonakala kwezilonda nezinqubo ze-purulent-necrotic ezinyaweni.
Ngubani emtholampilo obhekana nezinkinga zesifo sikashukela esweni?
Isifo sikashukela singenza ukungaboni kahle noma ubumpumputhe. Ukuze uvikele le nkinga ingaveli, kuyadingeka ukuqala ukwelashwa ngesikhathi. Esibonelweni sokuqala sezinkinga zamehlo, kufanele ufune usizo lodokotela wamehlo.
Udokotela wamehlo uzokwenza izinto ezingekho emthethweni:
hlola amehlo nge-ophthalmoscope,
izobheka i-visual acuity,
izokala ingcindezi ye-intraocular.
Uma isifo sikashukela sibangela i-retinopathy, udokotela wamehlo uzonikeza ukwelashwa okuzonciphisa ukuthuthukiswa kwalesi sifo. Izinkinga zamehlo kungenzeka kakhulu ekubeni mdala.
Ngemuva kokuxilongwa kwesifo sikashukela, umuntu udinga ukuvakashela udokotela wamehlo okungenani isikhathi esisodwa ngonyaka ukwenza izivivinyo zokuvimbela izifo. Uma kunesidingo, kunikezwa ukwelashwa okufanele nge-ophthalmologist.
Kubalulekile! Isihluthulelo sempilo yeziso yiglocose legazi elijwayelekile. Uma kunesifiso sokubhekana nezinkinga, kungakuhle ukuthi ubheke ngokuqinile ukudla futhi udle nemithi njalo.
Yimuphi udokotela ozosiza ukwelapha i-neuropathy?
Esikhathini sikashukela, imikhumbi emincane iyathinteka. Lokhu kungaholela ku-neuropathy. Le pathology ukuphazamiseka kohlelo lwezinzwa. Njengoba izinkinga zikhula, amandla omuntu wokusebenza ayancipha. Hlukanisa phakathi kwe-neuropathy ephakathi nendawo nethintekile. I-neuropathy yesifo sikashukela ihambisana nezimpawu ezilandelayo:
Uma umuntu efuna ukwazi kahle ukuthi igama likadokotela ophatha i-neuropathy libizwa kanjani, khona-ke umelaphi angamnika impendulo. Ezimweni eziningi, udokotela wezinzwa ubandakanyeka ekwelashweni. Ukuqinisekisa ukutholakala kwe-neuropathy, ukuxilongwa kwenziwa kusetshenziswa i-electroneuromyography.
Kuyaqapheleka ukuthi odokotela bezinhliziyo, ochwepheshe bezinzwa, abedokotela bamazinyo, odokotela abelapha izingane kanye nabanye ochwepheshe abaningi bangabamba iqhaza ekwelashweni kwe-neuropathy. Ngenxa yale nkinga yesifo sikashukela, kuvela inani elikhulu lezinkinga. Kuyadingeka ukuthi ubonwe ngudokotela ukuze uvikele ukuthuthukiswa kwe-neuropathy.
Isifo sikashukela sidinga ukwelashwa ngokushesha. Lapho ikhonjwa, uhlobo lokwelashwa oluphambili luyi-endocrinologist. Njengoba izinkinga nokunye ukubonakaliswa kwalesi sifo kwenzeka, abanye ochwepheshe bangajoyina ukwelashwa. Umuntu onesifo sikashukela kumele abe nolwazi olwanele ukuze azisize. Ngalesi sifo, udinga ukuphila impilo yakho yonke, ngakho-ke nakanjani kudingeka wazi konke ukubonakaliswa kwaso kanye nezinkinga ezingakhona.
Imininingwane ethokozisayo ngesifo sikashukela ingatholakala kuvidiyo:
Izizathu zokuvakashela i-endocrinologist
Isiguli sidinga ukubonana nodokotela we-endocrinologist lapho enezimpawu: ukoma okungaguquki, ukulunywa kwesikhumba, izinguquko ezisheshayo zesisindo, izilonda ezivame ukhunta zolwelwesi lwama-mucous, ubuthakathaka bemisipha, ukwanda kokudla.
Lapho kuvela izimpawu eziningana ebusweni mayelana nokwakhiwa kwesifo sikashukela, izinhlobo ezi-2 kakhulu. Udokotela we-endocrinologist kuphela ongaphika noma aqinisekise ukutholakala kwesifo.
Imvamisa, ukuvakashela lo dokotela, qala ngokubonisana nodokotela wezokwelapha, udokotela wesifunda. Uma eyalela ukunikela ngegazi, ukuhlaziya kuzokhombisa ukwanda noma ukwehla kwe-glycemia, kulandelwe yisidlulisela kudokotela obambelela kule nkinga ophatha le nkinga.
Esikhungweni sikashukela sanoma yiluphi uhlobo, isiguli sibhalisiwe, bese udokotela enquma uhlobo lwesifo, akhethe imishanguzo, akhombe ama-concomitant pathways, anqume imithi yesondlo, aqaphe ukuhlaziywa kwesimo nesiguli.
Uma umuntu onesifo sikashukela efuna ukuphila impilo ephelele, kudingeka avivinye njalo futhi anikele ngegazi likashukela.
Uma kutholakala noma yiluphi ushintsho lwesimo esingajwayelekile emzimbeni, kuyaphuthuma ukuhlangana nomelaphi bese uthola imbangela yokubonakala kwabo. Ngokusekelwe emiphumeleni yokuhlolwa okuphelele, udokotela uzokuxilonga athumele kochwepheshe abalungile. Izimpawu eziphambili zesifo sikashukela yilezi:
ukwehla / ukwanda kwesisindo somzimba,
izifo ezijwayelekile ezibangelwa amagciwane kanye nezifo,
kwehlile i-potency ne-libido,
izifo ezihlala njalo zokukhunta.
Ngemuva kokuhlolwa kokuqala, i-endocrinologist izokwazi ukusungula isigaba esikhona soshukela i-mellitus, ngaphezu kwalokho, izonquma izinga le-sucrose futhi iphakamise inqubo yokwelapha.
Ukuqhubeka kwesifo sikashukela kungaholela ezinkingeni eziningi ezihambisana nazo zonke izitho zomuntu ezibalulekile. Okubi kakhulu ngemiphumela kungenzeka ukungaboni kahle, ukuvela kokuhluleka kwezitho eziningi nokuphuza kakhulu. Ngaphezu kwalokho, izingqinamba zesifo sikashukela zivela njalo zinamakhanda, kunciphe umbono, umfutho wegazi ophakeme, ukuhlukunyezwa kwemizwa.
Izimpawu ezingenhla zalesi sifo zisho ukuthi isifo sikashukela siyathuthuka futhi kungaholela ezinkingeni. Ngakho-ke, izinyathelo ezithathiwe ukwelapha azanele.
Ebhekene nesifo esingesihle njengesifo sikashukela, isiguli singaba nentshisekelo emkhakheni womsebenzi odokotela aso kuye. Uchwepheshe ngamunye wesifo sikashukela kufanele alandele imigomo elandelayo yezokwelapha:
ukunquma ukwelashwa okufanele
ukuvimbela izifo ezikhona zohlelo lwe-endocrine,
izincomo zokwelashwa kokulungiswa,
Ukuhlola ukondliwa nokuhlaziywa.
Ngaphezu kwalokho, i-endocrinologist iphatha amathambo, izifo zohlelo lwe-endocrine. Udokotela unquma ukwelashwa kwe-hormone esigulini, alwe nazo zonke izinhlobo zokukhuluphala, futhi futhi uphatha ukuzala. Ngomdlavuza, isiguli sidinga futhi ukuthi sihlolwe ngudokotela ogcina izifo (endocrinologist).
Yibaphi odokotela abelapha isifo sikashukela
Uma umuntu enikezwa lokhu kuxilongwa, khona-ke kulesi simo okuwukuphela kwedokotela odingekayo esigulini udokotela wobugqila, yize ukubonisana kokuqala kubanjwa udokotela, obese enquma zonke izivivinyo ezidingekayo bese enikeza udokotela ochwepheshe ukuthi aluhlole. Uhlelo olufanayo luyasebenza ezinganeni, kepha umgomo wokwelashwa ezinganeni nakubantu abadala uhlukile kancane. I-endocrinologist yezingane iyadingeka lapho ingane inama-pathologies wezindlala ze-endocrine. Ngaphezu kwalokho, kunconyelwa ukuthi bahlolwe ngezinkinga ezahlukahlukene zokukhula nentuthuko.
Lapho ukhomba izimpawu zokuqala zesifo sikashukela enganeni, udinga ukuvakashela udokotela ngokushesha okukhulu. Isifo sikashukela esemncane sikhula ngokushesha okukhulu kunabantu abadala. Lokhu kusho ukuthi ingozi yezifo ezihlangene, kanye nokubuyela emuva, iphakeme kakhulu. Ukuvimbela imiphumela engathandeki, ukwelashwa okufanele kuyadingeka. Udokotela we-endocrinologist wesigaba esivuthiwe sabantu bangathola ubuchwepheshe ku-genetics, gynecologist, udokotela ohlinzayo, we-thyroidologist, njll.
Isazi sofuzo seluleka isiguli futhi simqophe lapho isakhi sofuzo sikhona.
Kulokhu, ukwelashwa kokulondolozwa nezinye izindlela zokuvimbela kwenziwa ngokusekelwe enkingeni ekhona nakwinkambo yesifo. Ezimweni eziningi, lo dokotela unezingane ezinabazali abanenkinga yesifo sikashukela. Udokotela we-gynecologist yi-endocrinologist efanayo, yize kungeyona ingxenye yabesifazane kuphela emvakayo. Lo dokotela uyadingeka ukuthi ahlinzeke ikhambi eliphelele lokuzala kubantu besifazane. Ngaphezu kwalokho, lochwepheshe ukhomba ushintsho lwe-pathological emaqanda.
Isazi esingeziwe se-endocrinologist sihlinzwa. Imvamisa, udokotela ohlinzayo naye uphatha isifo sikashukela. Bangathunyelwa kuye uma isifo sesifinyelele esigabeni sokusebenza. Kulokhu, udokotela kufanele asungule isilinganiso sokungenelela kokuhlinzwa. Esimweni lapho udokotela ohlonza isifo isifo sikashukela esingu-1-2 noma i-insipidus yesifo sikashukela, uchwepheshe wesifo sikashukela onguchwepheshe omuhle kakhulu. Ngemuva kwakho konke, phakathi nalokhu kugula, kuyadingeka ukuqapha izondlamzimba, ubheke imodi efanele futhi unamathele kwimenyu ethile.
Njengoba i-mellitus yesifo sikashukela iholela ekusebenzeni okuphazamisekile cishe kwazo zonke izitho, isiguli sinconywa ukuba siyohlolwa udokotela ngudokotela oyi-neurologist, udokotela wamathambo, udokotela ohlinzayo wamathambo nodokotela wezifo zamehlo.
Ukutholwa kokuqala kwesifo sikashukela kufaka phakathi ukuhlola ushukela wegazi. Le ndlela ibhekwa njengeyolwazi kakhulu ekuqaleni kwesigaba senhlolovo. Ngemuva kokuthola imiphumela, udokotela uzokwazi ukubona isidingo sokwenqubo elandelayo yokuxilongwa.Ngaphezu kwalokho, ngokuya ngalesi sikhombisi, i-endocrinologist izokwazi ukunquma ukwelashwa.
Lesi sifo sihlukaniswe ngamazinga amane obunzima. Ekuqaleni, inkomba yokuqukethwe kwe-glycemic icatshangelwa lapha. Ukuthola indlela efanele yokuxilongwa, udokotela uthola ukubaluleka okukhulu kwizinkinga ezihambisana nalesi sifo. Isifo seBanga lesi-4 sibeka ingozi enkulu empilweni yeziguli. Kungavusa amaconsi okucindezela nobuhlungu emilenzeni. Ukuvimbela ubunzima, kumele kulandelwe zonke izincomo zikadokotela olapha lesi sifo.
Kungemva kokuba isiguli siziqedile zonke izindlela zokuxilonga lapho i-endocrinologist ikwazi ukusungula isigaba sesifo futhi ikhethe inqubo yokwelapha efiselekayo. Ngokusekelwe emiphumeleni yokuhlolwa kokuqala kanye nokuhlolwa okunikezwayo, udokotela uthola irekhodi lokwelashwa okuhloswe ngalo ukulungisa ukuhlukunyezwa okukhona emithanjeni, ukuvuselela, ukucindezela nokufaka ezinye izidakamizwa ngemithako yokudla.
Isikhathi eside, ama-endocrinologists enza izifundo zemitholampilo nokujula ukuthola izimbangela zangempela zesifo sikashukela nezinye izifo zezinhlelo ze-endocrine. Ngaphezu kwalokho, bakha izindlela zanamuhla zokwelapha, ukuxilonga nokuvikela izifo. Besebenzisa imiphumela etholakele, ochwepheshe be-endocrinology bethula izindlela zakamuva zezokwelapha nezidakamizwa. Njengomthetho, ngokungeziwe ekwelashweni okuyinhloko kwezidakamizwa sikashukela, ukudla okuthile kubekelwe ukusiza ukuqeda lokhu kugula.
Ukwelashwa okuhlanganyelwe nokulawulwa kuphela okuzosiza ukuvimbela izinkinga ezingaba khona. Ngosizo lokuhlolwa ngezikhathi ezithile kanye nezifundo ezenziwe, udokotela uzokwazi ukulungisa ukwelashwa komuntu ngamunye futhi akhethe ukudla okufanele.
Njengomthetho, isifo sikashukela sihambisana nomuntu impilo yakhe yonke. Lesi yisikhathi eside, ngakho-ke inhloso enkulu ukukhetha indlela engcono kakhulu yokwelashwa efanele isiguli esithile. Udokotela ufaka imishanguzo edingekayo, izifundo zokwelashwa ngevithamini, izincomo zokudla nokuzivocavoca umzimba. Into esemqoka ukungakhohlwa ukuthi ukuvakasha ngokufika kudokotela onolwazi kusiza ukuvimba imiphumela engathandeki, ngoba kulula kakhulu kunokulapha lesi sifo uqobo. Ngakho-ke, isiguli ngasinye kufanele sithinte uchwepheshe ngesikhathi.
Liyini iqembu lesifo sikashukela?
I-endocrinologist nomhlengikazi wehhovisi le-endocrinology. Emazweni amaningi anezinga elihle lokuthuthuka kokunakekelwa kwempilo, umhlengikazi wenza imisebenzi ekhethekile, ebaluleke kakhulu. Nazi ezinye zazo:
ukukalwa okujwayelekile kwesisindo somzimba nokujikeleza kwesiguli,
ukuqeqeshwa ngomjovo we-insulin,
ukufundisa ukuzihlola ushukela wegazi nge-glucometer,
ukuqeqeshwa ngezindlela zokuhlola izinyawo nokunakekela zona, njll.
"Umhlengikazi wehhovisi le-endocrinology" ungumzuzu omuhle emlandweni wezokwelapha, lo msebenzi uvele esikhaleni se-post-Soviet.
Isazi se-Ophthalmologist. Isifo sikashukela siyingozi ngenxa yezinkinga zaso, esinye sazo ukungaboni. Ukuvakashela "kudokotela wamehlo" kuphoqelekile kwiziguli ezinesifo sikashukela. Imvamisa yokuvakashelwa incike kuhlobo nesikhathi ubude besifo.
Ukungabonakali kwesifo sikashukela maqondana namehlo ukuthi ezigabeni zokuqala zesifo sikashukela retinopathy azinazimpawu ezithile, kuphela udokotela wamehlo ongakwazi ukubona izinguquko ngosizo lwemishini ekhethekile.
Kodwa-ke, ukuhlolwa okuphuthumayo kuyadingeka uma kuvela izimpawu ezilandelayo:
"Imibani ikhanyisa" phambi kwamehlo,
"I-veil" noma amabala amnyama,
Ubuhlungu obukhali noma ukwehla okungazelelwe ku-acuity ebonakalayo.
Noma kungekho ukukhathazeka kwamehlo, ukuhambela njalo kudokotela wezifo zamehlo sikashukela kuyadingeka.
Isazi sezinzwa. Njengomthetho, inkinga yokuqala yesifo sikashukela ukuphulwa kokuzwela ezinyaweni (sikashukela distal polyneuropathy). Isiguli uqobo siphawula ukushuba kwezinzwane, umuzwa "wokukhasa", ukudonsa nezinye izimpawu.
Kulokhu, udokotela wezinzwa wenza ucwaningo olukhethekile lwezinhlobo ezinhlanu zokuzwela futhi asungule ukuxilongwa okunembile.
Uma i-distal polyneuropathy ingalashwa ngesikhathi, isifo sikashukela sonyawo kanye ne-Charcot osteoarthropathy singakhula. Ngalezi zinto, kuzodingeka usizo lukadokotela okhethekile - i-podotherapist (obizwa nangokuthi yi-podiatrist, podologist). Odokotela abahlinzwa nabo bayabandakanyeka kule nkinga.
Isazi sezinhliziyo. Izibalo eziqhubekayo zibonisa ukuthi kungumphumela wesifo sikashukela enhliziyweni nemithambo yegazi ebi kakhulu esigulini futhi inquma isikhathi sakhe sokuphila.
Njengoba ngesifo sikashukela izinzwa "zifa" endaweni yokuqala, izinguquko zizokwenzeka enhliziyweni, futhi iziguli zingezwa nobuhlungu obuningi. Ngisho nokuhlaselwa yisifo senhliziyo kungenzeka kungabonakali umuntu. Futhi ngaphandle kokwelashwa okufika ngesikhathi, isimo sizoshuba ngokushesha.
Imiphumela emibi kakhulu yesifo sikashukela ukuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi esemncane.
Isazi sezinhliziyo singudokotela ophoqelelwe ngokuvakasha njalo lapho kukhona izikhalazo ezisuka enhliziyweni noma ushintsho ku-ECG.
Isazi se-Nephrologist. Lo dokotela ubhekana nezifo zezinso, kubandakanya nesifo sikashukela. Le nkinga ingasungulwa ngokuhlolwa kwegazi okune-biochemical kanye nokuhlolwa komchamo kwe-albhamuin. Lezi zivivinyo zenziwa njalo, futhi kuvame ukuqondiswa yi-endocrinologist. Uma kunesidingo, unikeza nokuya ku-nephrologist.
Isazi se-gynecologist. Lo dokotela uba okhethekile esigabeni sokuhlela ukukhulelwa. Ngisho eminyakeni eyi-10 eyedlule, uhlobo lwe-1 yesifo sikashukela yayivame ukubhekwa njengokuphikisana nokukhulelwa.
Kuze kube manje, iziguli zikhulelwa ngempumelelo futhi zizala izingane ezinempilo, kepha lokhu kudinga ukuhlelwa kokukhulelwa, lapho bobabili i-endocrinologist ne-gynecologist babamba iqhaza.
Isazi se-Urologist. Iziguli ziphendukela kulo dokotela kuphela uma kunesidingo esiphuthumayo, zivame ukuxazulula izinkinga zodwa, zithembela kwezentengiso nakweluleko sabangane. Isifo sikashukela kanye nokungasebenzi kahle kwezocansi kubantu besilisa kuhlobene kakhulu, ngakho-ke ukuvakashela lo dokotela ngeke kube nzima.
Kukangaki ukubona udokotela bese uthola ukuhlolwa?
Impendulo yalo mbuzo esimweni ngasinye iyodwa, kodwa ingafushaniswa ngokulandelayo:
Ithebula - Kukangaki ukuvakashela odokotela nesiguli esinesifo sikashukela Ithebula - Kukangaki lapho iziguli ezinesifo sikashukela zihlolwa
Ngakho-ke, kuphela imizamo ehlangene yabodokotela, isiguli nezihlobo zayo ezingalapha ngempumelelo isifo sikashukela.
I-endocrinologists ehamba phambili
Isiguli esivele sikhona selulekwa ukuba senze isikhathi sokubonisana nodokotela we-endocrinologist uma esethole izimpawu ezithile. Lokhu kungaba ukwanda okungazelelwe noma, ngakolunye uhlangothi, ukulahla amakhilogremu noma, ngokwesibonelo, ukoma okungapheli. Ngaphezu kwalokho, ohlwini lwezimpawu zesifo sikashukela ezinjengalezi:
ukwenziwa njalo kwama-fungal pathologies (ngokwesibonelo, ukuthuthukiswa kwe-thrush),
ukuhlangana njalo nama-pathologies afana nomkhuhlane noma i-SARS,
Ngaphezu kwalokho, abanesifo sikashukela bangathola izikhalazo zobuthakathaka bemisipha, ukulunywa kwesikhumba. Ngezimpawu eziningana, singakhuluma ngokuzethemba ngokwakhiwa kwesifo sikashukela sohlobo 2. Qinisekisa noma uphikise lokhu kutholwa kuphela nge-endocrinologist.
Isazi se-endocrinologist yisipesheli esinamagatsha amaningi: uchwepheshe wezingane, isazi sofuzo, udokotela wezifo zabesifazane nabanye. Ngakho-ke, udokotela wokuqala usebenzelana ne-pathologies yesistimu ye-endocrine enganeni. Kumele kuqondwe ukuthi lesi sifo ebuntwaneni sakha ngokushesha, kanye ne-concomitant pathologies.
I-genetics ibheka ukumbozwa kwama-pathologies wefa, okubandakanya isifo sikashukela. Akasathandwa kangako ngudokotela wezifo zamazinyo ophatha izifo ezihambisana nohlelo lokuzala kubantu abanesifo sikashukela.
udokotela ohlinzayo - uphatha lesi sifo esiteji esisebenzisekayo, okuvumela ukuthi usungule indlela nezinga lokungenelela kokuhlinzwa,
Udokotela wesifo sikashukela udokotela ophatha iziguli ezinesifo sikashukela noma okunye ukhubazeka ekuthuthukiseni lesi sifo,
uchwepheshe we-thyroid uzinikela ekuxilongeni nasekuzimiseleni kwezindlela ezidingekayo zokwelapha zezimo ze-pathological ku-endocrine gland. Konke lokhu kubaluleke kakhulu kwabanesifo sikashukela.
Udokotela wesifo sikashukela unikeza usizo olukhulu ngalesi sifo. Njengoba kuphawuliwe ngaphambili, kusho izindlela eziphambili zokuthola kabusha: izidakamizwa, ukudla. Kuyinto i-endocrinologist kubantu abadala nasezinganeni evumela ukuthi wena ukwazi ukusungula amandla omzimba avumelekile, uyithumela ezivivinyweni ezifanelekileyo zokuxilonga.
Kwabanesifo sikashukela, kubaluleke kakhulu ukubonana nodokotela wakho njalo. Lokhu kwenza ukuthi sikwazi ukunxephezela i-pathology, ukubheka ukusebenza kwe-insulin noma izinto ezinciphisa ushukela. Ngaphezu kwalokho, yi-endocrinologist elapha lesi sifo futhi isize ukugwema ukuthuthukiswa kwezinkinga nemiphumela ebucayi.
Ngokusho kwe-WHO, njalo ngemizuzwana emihlanu umuntu oyedwa uba nesifo sikashukela. Lesi sifo sinikezwe isimo sesiwubhubhane, futhi ngonyaka ka-2030 sizothatha indawo yesikhombisa izimbangela zokufa emhlabeni.
Cishe wonke umuntu uyazi ngezimpawu zakudala zalesi sifo - ukoma kakhulu, ukuchama kaningi. Ukubonakaliswa okunjalo kliniki kumele kube yisizathu esisemqoka sokuvakashela udokotela womndeni, owelaphi. Banikeza ukuqondiswa ku-endocrinologist, omsebenzi wakhe ugxile ekuxilongeni, ekwelashweni nasekuvinjelweni kwezifo zohlelo lwe-endocrine. I-Diabetesology, njengengxenye yesigaba se-endocrinology, isebenza kuphela ngesifo sikashukela.
Kwenziwa ucwaningo ngohlelo lwe-endocrine luphelele.
Inquma iqoqo lezindlela zokuxilonga.
Ukuxilonga i-pathology, ifomu kanye nohlobo lwalesi sifo, kunquma ukwelashwa (ukulungiswa kokulinganisela kwe-hormonal, ukubuyiselwa kwe-metabolism).
Ilungisa futhi ikhethe ukudla okuthile.
Inquma iqoqo lezindlela zokuvimbela ukubhekana nezinkinga, linquma ukwelashwa okwengeziwe.
Wenza ukubonwa kwezokwelapha.
I-Endocrinologists-diabetesologists ibhekana ne-pathology ezinganeni nakubantu abadala ngokwahlukana. Ukwahlukanisa okunjalo kuyadingeka ngenxa yezizathu eziningana:
Ebuntwaneni, kukhula isifo sikashukela sohlobo 1, futhi abantu abadala basengozini enkulu yokuba nesifo sohlobo 2. Imigomo nendlela elashwa ngayo ekwelashweni kweminyaka yobudala ehlukile yehlukile.
Iziguli zabantu abadala zidinga eminye imithamo nezinhlobo ze-insulin.
Isiguli esingahle sikhona kufanele sibonane nodokotela we-endocrinologist uma enazo ezinye zalezi zimpawu:
isethi ebukhali noma eyehla amakhilogremu,
ukuvela kaningi kwezifo zokukhunta (thrush),
izifo ezijwayelekile zomkhuhlane kanye ne-SARS,
Ngezimpawu eziningana, singakhuluma ngokwakhiwa kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo II. Qinisekisa noma uphikise lokhu kutholwa kuphela nge-endocrinologist.
Ezweni lethu, inqubo yokuvakashela i-endocrinologist ayilula. Ukudluliselwa kochwepheshe abangochwepheshe kungatholakala kuphela nge-Therapist. Ngakho-ke into yokuqala ukuthi uye emaphoyiseni wesifunda. Ngemuva kokudlulisela ukuhlolwa kwegazi kwe-glucose nokuthola i-glycemia, kuzodluliselwa kudokotela obulala i-endocrinologist.
Lochwepheshe uzokwenza ucwaningo lwakhe ukuze aqinisekise noma aphike ukuthi lesi sifo sitholile. Lapho esethole isifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo, isiguli siyabhaliswa, udokotela bese enza ngokwezimiso ezilandelayo:
ukunqunywa kohlobo lwesifo sikashukela (I noma II),
ukuvikela izifo ezihlangene,
Ukuhlolwa kwezivivinyo kanye nesimo sesiguli.
Isiguli ngaphansi kokuhlolwa udokotela kuzofanela silandele lezi zimiso uma sifuna ukuphila impilo ejwayelekile, egcwele.
Ngakho-ke, ngudokotela lo onguchwepheshe ekwelapheni isifo sikashukela. Ubungcweti bakhe abugcini kulokhu, bukhulu ngokwanele futhi buhlanganisa noma yikuphi ukwephulwa kohlelo lwe-endocrine emzimbeni.
I-Hypothalamus kanye ne-pineal gland,
Uma sikhuluma ngezifo, khona-ke ekwazisweni kwe-endocrinologist - ukugula okunjalo:
Ushukela wazo zonke izinhlobo,
Isilinganiso esandayo se-calcium egazini,
Ukukhiqizwa ngokweqile kwama-hormone.
Amandla alo dokotela nezinye izifo ze-endocrine - ukukhuluphala, ukuqina kwamathambo, ukungasebenzi komzimba ngokobulili.
Lapho ufika kuqokwa i-endocrinologist, uzokulalela, abheke umlando wezokwelapha, alinganise umfutho wegazi, alalele inhliziyo, futhi akunikeze izivivinyo nokuhlolwa okudingekayo.
Ehhovisi lakhe, ngaphezu kwesikali, kufanele futhi kube neteyiphutha yamasentimitha, i-glucometer, imitha yokuphakama, izivivinyo zemivimbo kanye nemishini yokuthola ubunzima bezinkinga zesifo sikashukela.
Ukuqoshwa kutholwe ngocingo8 (499) 519-35-82
Isilinganiso Murashko (Mirina) Ekaterina Yuryevna Nutritionist, Endocrinologist
I-PhD kumaSayensi Wezokwelapha
Udokotela wesigaba sokuqala Izindleko zokwamukelwa - 3500r.1750r. ku-medportal.net kuphela! Ukuqokwa ngocingo
I-8 (499) 519-35-82 Uchwepheshe ohola phambili womtholampilo. Ubandakanyeka kuma-thyroid pathologies, ushukela, i-osteoporosis, ukukhuluphala, i-adrenal gland pathologies. Uhambela njalo izingqungquthela zesayensi, kubandakanya nezangaphandle kanye nezaphesheya .... I-Moscow, st.
Isilinganiso Ermekova Batima Kusainovna Nutritionist, Endocrinologist
Izwa iminyaka engu-6. Izindleko zokwamukelwa - ama-ruble ayi-1500. Ama-ruble ayi-1350. ku-medportal.net kuphela! Ukuqokwa ngocingo
I-8 (499) 519-35-82 Ikhethekile ekuxilongeni nasekuphatheni izifo zohlelo lwe-endocrine. Lapho usebenza nabantu abakhuluphele ngokweqile, okokuqala, kuseshwa okwenziwa izimbangela eziphambili zalesi simo nokuqedwa kwabo, bese kufinyelela ku ... g. I-Moscow, st.
Isilinganiso Malyugina Larisa Aleksandrovna Endocrinologist
Izwa iminyaka engu-19. Izindleko zokwamukelwa ngama-ruble angama-2100.
I-8 (499) 519-35-82I-Receptati yangaphandle yokwamukela kanye nokuphathwa kweziguli ezine-endocrine pathology, ukunquma ukudla, ukunquma ukudla ngakunye, ukuphatha iziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus, ukuphatha iziguli ezinezifo ze-thyroid, ... I-Moscow, st.
Isilinganiso Kuznetsova Elena Yuryevna Endocrinologist
Udokotela wesigaba esiphakeme kakhulu sokwamukelwa kwezindleko - ama-ruble ayi-1590. ku-medportal.net kuphela! Ukuqokwa ngocingo
I-8 (499) 519-35-82 Ikhethekile ekwelashweni kwezifo ze-endocrine, iziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus, ngezifo zomgogodla we-thyroid, izindlala ze-adrenal, ukwelashwa kweziguli ezinomonakalo ohlelweni lwe-hypothalamic-pituitary. Njalo kuhlanganyela ... g. IMoscow, Prospekt Mira, d. 105, k. 1. Alekseevskaya, VDNH
Izisebenzi zemitholampilo eminingi zinama-endocrinologists. Uma kukhona izinsolo zesifo sikashukela i-mellitus, owelaphi usho i-endocrinologist. Uma ukuxilongwa sekuvele kusunguliwe, isiguli sihlelelwe ukuhlolwa okuhleliwe ngokuzimele ngokusebenzisa irejista.
Emadolobheni amaningi amakhulu, kunezikhungo zesifo sikashukela lapho isiguli singathunyelwa khona ukuze siyohlolwa okuningiliziwe. Izikhungo ezinjalo zinabo ochwepheshe abadingekayo nemishini edingekayo.
Imvamisa, ukuvakashela lo dokotela, qala ngokubonisana nodokotela wezokwelapha, udokotela wesifunda.Uma eyalela ukunikela ngegazi, ukuhlaziya kuzokhombisa ukwanda noma ukwehla kwe-glycemia, kulandelwe yisidlulisela kudokotela obambelela kule nkinga ophatha le nkinga.
Yikuphi udokotela okufanele ahambe naye ukuze athole isifo sikashukela kuqala
Izimpawu zesifo sikashukela zidalwa ukwenyuka kwamazinga kashukela. Phakathi kwazo kukhona:
Uma unenombolo yalezi zibonakaliso, sekufanelekile ukubheka lokho ongakuthuthukisa
kulokhu, okokuqala - umeluleki. Uchwepheshe wezokwelapha uzokwenza ukuxilongwa kokuqala, anikeze ukudluliselwa kwezivivinyo, ukuqhubeka kokuhlolwa nokwelashwa.
Ngaphandle kokubamba iqhaza kwe-Therapist nabanye odokotela ekuxilongeni isifo sikashukela, isiphetho sokugcina sinqunywa yi-endocrinologist. Udokotela ofanayo unquma isu elingelinye lokwelashwa, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokwelashwa kwe-insulin.
Njengoba i-endocrinologist ingudokotela ophambili wesifo sikashukela, ngaphezu kokwelashwa okuyinhloko, uhola isiguli ngokuzayo. Kucatshangelwa ukuthi athole izeluleko ngezinkinga zempilo enempilo. Futhi, i-endocrinologist ngezikhathi ezithile ikhumbuza izigceme zabanesifo sikashukela ngesidingo sokuhlolwa okujwayelekile.
Ezimweni eziningi, isifo sikashukela siqala ukukhula kubantu asebekhulile. Ngokuhamba kwesikhathi, ukusebenza kwamanyikwe kuyancishiswa, okuholela ekukhuleni kohlobo lwesifo sikashukela esincike ku-insulin.
Yimuphi udokotela obhekana nalolu daba - ekuqaleni i-endocrinologist efanayo. Ngokuhamba kwesikhathi, lapho irejimeni yokwelashwa ivunywa futhi isungulwe, ungaxhumana nodokotela ongumeluleki ngezeluleko.
Ukuqinisekisa ukulawulwa okugcwele kweziguli,
ingadlulisa isiguli kochwepheshe bezokwelapha abancane. Yimuphi udokotela ozodinga ukuya kuye ngokuya ngezinga lesifundo lalesi sifo.
Futhi, ngokuba nentshisekelo yokuthi yimuphi udokotela oxhumana naye onesifo sikashukela, kufanele ukhumbule njalo ngodokotela onempilo. Lo dokotela uzonikeza izincomo zokudla okunempilo okusebenzayo kuhlobo oluthile lokugula. Ngaphezu kwalokho, lapho kwakheka ukudla, umondli wezempilo unaka ukulungiswa kwesisindo sesiguli. Lokhu kuyinto ebalulekile ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2.
Kwezinye izimo, lesi sifo siyimbangela yezinkinga ezahlukahlukene:
i-pathology yemikhumbi emincane, njll.
Ngenxa yalokhu, ukuphakelwa kwegazi kuyaphazamiseka, izitho zomzimba ziyahlupheka, amanxeba ayaphola isikhathi eside. Kulokhu, iziguli ezinesifo sikashukela ziya kudokotela ohlinzayo.
Kwesinye isikhathi lesi sifo sithinta uhlelo lwezinzwa, esidinga ukuvakashelwa kudokotela wezinzwa. Ngisho nodokotela wamehlo uthathwa njengodokotela olashwa nesifo sikashukela. Ngempela, kwezinye izimo, lesi sifo sithinta i-retina - lokhu kubizwa ngokuthi yi-retinopathy yesifo sikashukela.
Bona udokotela wakho ngokushesha nje lapho usola isifo sikashukela. Uma kungekho ukwelashwa, umuntu angaboni kalula, alahlekelwe imilenze futhi afe.
Snoring, okuyinto udokotela ukubheka.
Ukwelashwa kwesifo esibi kangako njengesifo sikashukela kwenziwa yi-endocrinologist. Lochwepheshe obheka ushukela wegazi, uqapha isimo sama-hormone. Ake sibheke kabanzi ngemisebenzi yayo.
Ukuphathwa kweziguli zesifo sikashukela kwenziwa yi-endocrinologist. Iziguli kuyaqabukela zifike kuchwepheshe onjalo ngokusola kwalesi sifo. Ekusebenzeni, umuntu uza kumelaphi wendawo ngezikhalazo ezingezona ezikhethekile zokoma, ukwanda kokuchama, isifiso sokudla, noma ukwanda kweglucose kutholakala ngengozi ngesikhathi sokuhlolwa kwezempilo.
Umsebenzi wamaphoyisa wesifunda ukusola i-mellitus yesifo sikashukela bese uyithumela ku-endocrinologist ukucacisa ukutholakala kwalesi sifo.
Ngenxa yokwanda kwalesi sifo, kuye kwenziwa usizo oluhlukile - udokotela wesifo sikashukela (udokotela wesifo sikashukela). Udokotela onjalo usebenzelana kuphela neziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus, ngoba ukuphathwa kwazo kudinga ukunakekelwa okukhethekile nendlela eyodwa.
Udokotela wesifo sikashukela udokotela obalulekile we-endocrinologist ofunda ukuvela nokukhula kwesifo sikashukela.
Ngokwesilinganiso sex, abesilisa nabesifazane bagula cishe imvamisa efanayo.
Isifo sikashukela yisifo esingapheli esihlala isikhathi eside. Kwesinye isikhathi isifo kuqala sizenze sizizwe ngokukhula kwesimo esibi esidinga ukulaliswa esibhedlela ngokushesha. Imayelana namahlaya. Uma isiguli singazi ngezinga le-glucose eliphakeme futhi singazinaki izimpawu zesifo, khona-ke ushukela osegazini lakhe ukhuphuka kakhulu kangangokuba kukhula ukoma kwe-hyperglycemic.
Kunesimo esibuyela emuva - isiguli besenesikhathi eside sinolwazi ngokugula kwakhe futhi siphuza imishanguzo njalo. Kepha abantu asebekhulile, ngenxa yezinguquko ezihlobene nobudala kwimemori, bangathatha iphilisi ukwehlisa ushukela futhi, bese glucose wegazi wehlela ezingeni elibucayi ngokwakhiwa kwe-hypoglycemic coma.
Isifo sikashukela sohlobo loku-1 sivame ezinganeni, kanti ukuxilongwa kwenziwa emasontweni okuqala empilo. Isifo sikashukela esingancike e-insulin yisiphetho sabantu abadala. Kulokhu, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, ukumelana ne-insulin kwenzeka (amaseli awakwazi ukusebenzisana ne-insulin). Lesi sifo kubantu abanjalo kwesinye isikhathi sihlanganiswa ne-hypertension, ukukhuluphala kanye ne-cholesterol ephezulu.
ukunakwa uhlobo = okuluhlaza I-endocrinologist ngudokotela onguchwepheshe wayo ukuxilongwa nokwelashwa kwe-pathologies yohlelo lwe-endocrine. / ukunakwa
Le nkomba kwezokwelapha ihlukaniswe izingxenye ezimbili:
I-Pediatric endocrinology (i-pathologies yokukhula nentuthuko, thayipha i-1 mellitus yesifo sikashukela kanye nezinye izinhlobo zesifo sikashukela ezinganeni, ukuphazamiseka kwe-hormonal kanye nomdlavuza wohlelo lwe-endocrine).
I-General endocrinology (izingqinamba zempilo yezocansi yabesilisa nabesifazane, ukuphazamiseka kwama-hormone, izinkinga ze-neuroendocrinology, izindlala ze-adrenal, i-gland yegilo, i-mellitus yesifo sikashukela, i-steoporosis kanye nokukhuluphala kwengqondo).
Njengoba ubonile, lo dokotela unesifo esikhudlwana kakhulu. Futhi isifo sikashukela singenye nje kwezinkomba. Ngakho-ke, lapho uzikhethela wena onguchwepheshe, kubalulekile ukuba unake ukubuyekezwa kweziguli, isipiliyoni somsebenzi nemisebenzi yesayensi.
Uma uthatha isinqumo sokulashwa esibhedlela sikahulumeni, khona-ke awunakukhetha. Imvamisa kukhona eyodwa, vele, iningi, odokotela ababili kulokhu kulesibhedlela. Futhi kaningi laba bangabantu asebekhulile abathola imfundo eminyakeni edlule.
Ngokusebenza ngomholo omncane, ochwepheshe abanjalo abanaso isifiso noma amandla okufunda izindlela nezidakamizwa zesimanje. Into ebaluleke kakhulu kodokotela abanjalo isipiliyoni. Uma unesifo sohlobo olujwayelekile 1 noma uhlobo 2 sikashukela, khona-ke akumele kube nezinkinga ngokwelashwa.
Uzonikezwa izidakamizwa ezifinyelelekayo ezingabizi, zizothi kanye ngenyanga zizihlole ushukela elabhoratri, futhi zizokuthumela ekhaya ngamagama athi: "Kwiminyaka yakho, ushukela 8 kuyinto ejwayelekile, unganaki."
Kepha uma unesifo sikashukela se-LADA, noma uthayiphe isifo sikashukela eneminyaka engu-30, ke kungcono ukuxhumana nomtholampilo wangasese. Ezibhedlela ezinje, kunenqwaba yongoti abasebancane abathole ubuchwepheshe phesheya, bafunda amaphephabhuku ezokwelapha anamuhla futhi bazijwayeza ukuthuthuka kwakamuva kwezokwelapha.
Ukukhetha i-endocrinologist ekhokhelwe kahle, naka:
Ukubuyekezwa kweziguli kumasayithi azimele okusesha odokotela.
Ezemfundo kanye nezifundo ezahlukahlukene eziqhubekayo zemfundo, amasemina nokuningi.
Ukuthola udokotela emiphakathini ehlukahlukene yezokwelapha.
Amaphepha wesayensi noma izincwadi zemagazini.
Ekwamukeleni kokuqala, kufanele uziqaphele okulandelayo:
Ingabe udokotela uzama ukunikeza izivivinyo eziningi nemithi ngangokunokwenzeka, engakhokhelwa kuphela emtholampilo wabo. Uma enza, zizwe ukhululekile ukushiya uchwepheshe onjalo. Udokotela omuhle wesifo sikashukela uzoba nentshisekelo kakhulu ngalesi sifo futhi ngeke akunikeze noma yini ekuqaleni kwesifo.
Ukunqunywa okunembile kohlobo lwesifo sikashukela ukwelashwa okuphumelelayo okungama-99%. Naka esigabeni sokuxilongwa, ingabe uchwepheshe uzokhipha izinhlobo ezingavamile zesifo?
Zazise ngokwakho ukuthi udokotela uphoxwa umuzwa wakho wangaphambilini ngesikhathi sokwelashwa kwakho. Umshwana: “Sengivele ngahlangabezana nale nkinga. Ngakho-ke, kufanele ... "ukhuluma ngendlela ephumelelayo esekelwe kumacala aphumelele noma awazange abe njalo.
Abafundi bendawo yethu kuzoba lula kakhulu ukuqonda izinga lodokotela. Uma usaqala, hlola izigaba ngezinhlobo zikashukela, izimbangela zazo kanye nokwelashwa.
ukunakwa uhlobo = ophuzi Khumbula ukuthi ukuxilongwa kanye nokwelashwa okufanele kwesifo sikashukela kuyisihluthulelo sempilo ejabulisayo nokwanelisayo.
Uma uthola iphutha, sicela ukhethe ucezu lombhalo bese ucindezela u-Ctrl Enter.
Ngokushesha nje ngemuva kokuba umuntu eye wabona izimpawu kuye noma enganeni yakhe, kunconywa ukuthi athintane ngokushesha nodokotela womndeni noma nodokotela wezokwelapha lapho uhlala khona. Lezi zingcweti kufanele zinikeze uhlelo oludingekayo lokuxilonga, luqinisekise noma luqine lolu daba.
Udokotela onesifo sikashukela ubizwa ngokuthi yi-endocrinologist. Hlanganisa nodokotela osebenzelana ne-pathology ezinganeni futhi ngokwahlukana kubantu abadala. Lokhu kwehlukana kuyadingeka ngenxa yezizathu eziningana:
Ezinganeni, ukukhula kwesifo sikashukela sohlobo 1 kuyisici, kubantu abadala, okwesibili kuvame kakhulu,
Imigomo yokwelapha ingane nomuntu omdala yehluke kakhulu,
Iziguli ezindala zidinga eminye imithamo ye-insulin uma iqhathaniswa nezingane.
Kungumsebenzi we-endocrinologist ukunikeza izinqubo ezikhethekile zokuxilonga eziqinisekisa ukutholwa. Ngemuva kokukhomba lesi sifo, uchwepheshe unquma ukwelashwa okudingekayo, kuya ngohlobo nohlobo lwalesi sifo.
Udokotela uphatha isifo sikashukela futhi uhola isiguli kusukela ngesikhathi sokuxilongwa. Njalo, isiguli kufanele sithintane ne-endocrinologist ukuthola izivivinyo ezidingekayo, ukulungiswa kwe-insulin therapy kanye nokuqokwa kokwelashwa okwengeziwe.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, izimpawu zokuqala azikwazi ukubizwa njalo noma zinobuntu. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngokwanda ushukela wegazi, naka ukoma nokwenyuka komchamo kungakapheli amahora angama-24.
Ungaqala kuphi ngesifo sikashukela esisolwayo?
Abantu abavame ukujaha ukuya kudokotela ngezinkinga zabo, futhi banethemba lokuthi lesi sifo sizodlula uqobo. Kepha isifo sikashukela yisifo esingelapheki esingabonakali, futhi akunakwenzeka ukuba useluleme.
Yikuphi ukugula okufanele kube yisizathu sokuvakashela i-endocrinologist:
womile njalo ngomlomo owomile
isikhumba esomile nesikhanyayo,
ukwehla kwesisindo okungazelelwe noma, ngakolunye uhlangothi, inzuzo yesisindo,
Ekuqesheni kokuqala, udokotela we-endocrinologist uhlola isiguli. Ngemuva kokuthi kusetshenziswe iqoqo lezindlela zokuxilonga:
ukuhlolwa kwegazi kokubekezelela ushukela.
Lezi zivivinyo ezilula zenza kube lula ukuthi ama-99% asungule ukuba khona kwesifo noma asuse izinsolo zesifo sikashukela.
Uma ukutholwa kokuqala kuqinisekisiwe, udokotela unquma ezinye izifundo:
izinga leshukela ngesikhathi sosuku
Ukuhlaziywa komchamo we-acetone,
ukuhlaziywa kwe-biochemical for triglycerides, cholesterol,
i-ophthalmoscopy yokunquma i-visual acuity,
ukuhlolwa okubanzi komchamo wesilinganiso sokuhlunga, i-albhamuinuria, i-creatinine, i-urea.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa, i-endocrinologist futhi ilinganisa umfutho wegazi wesiguli, imyalela esifubeni i-x-ray kanye ne-rheovasography ephansi yomlenze.
Ngokusekelwe kudatha etholakele, i-endocrinologist inquma uhlobo lwesifo sikashukela, izinga lokuthuthuka kwalesi sifo, futhi inquma ukwelashwa. Kuqala ngokwelashwa kwezidakamizwa kuhlangene nokulungiswa komsoco.
Ukuxhumana kwabanye ochwepheshe
Uchwepheshe omkhulu ophatha isifo sikashukela ngudokotela wesifo sikashukela. Ukuqokwa okukhethekile ngudokotela kumnika ithuba lokusebenzisa ngokuzimele imishini ephezulu yobuchwepheshe. Isizinda solwazi sikuvumela ukuthi ukhombe futhi uhlaziye zonke izinqubo ze-pathological ezikhula ngemuva kwesifo sikashukela.
Ama-Nutritionists, odade basezinqubo, abasizi belebhu, kanye nodokotela bengqondo nabo bayabandakanyeka ekwelashweni nasekuphatheni kweziguli. Baqhuba ukuqeqeshwa komuntu ngamunye neqembu ezinhlelweni ezikhethekile.
Isiguli ngasinye kufanele siqaphele ukubonakaliswa komtholampilo kwalesi sifo, izimbangela zezimo eziphuthumayo nosizo lokuqala. Iziguli zidinga ukufunda ngokuzimela ukunquma nokulawula amazinga ashukela wazo ekhaya.
Ngezinkinga ezithuthukisiwe, isiguli sidinga ukuhlolwa ngonyaka kusuka kochwepheshe abahlobene:
Ingxaki yesifo sikashukela i-mellitus yi-retinopania, ukwephulwa kwezindonga zosuku losuku kanye nokwehla kancane kombono kuyelashwa futhi kuqashelwe yisazi sezitho zamehlo. Udokotela ulinganisa ingcindezi ye-intraocular, uhlola i-acuity ebonakalayo, isimo semithambo yegazi, ukubonakala komzimba we-vitreous kanye nelensi.
Nge-nephropathy, ukulimala kwezinso ngokuhlunga okungenampilo, iziguli ziboniswa ukubonwa yi-nephrologist. Udokotela uhlola isimo sezicubu zezinzwa: ukuzwela kwabo, i-Reflex, amandla emisipha.
Izilonda zesifo sikashukela semikhumbi emikhulu, i-atherosclerosis, i-venous thrombosis ziyalulekwa ngudokotela ohlinzayo wemithambo.
Ngama-neuropathies, ukulimala kohlelo lwezinzwa oluyingozi, iziguli zimiselwe ukuhlolwa ngudokotela oyi-neurologist.
Ukuhlolwa kwaminyaka yonke kweziguli ezinesifo sikashukela kufaka ukuvakashela udokotela wezifo zabesifazane.
Ukuqashwa kweziguli kwezifo ezinesifo sikashukela kwenziwa emitholampilo yesifunda endaweni yokubhalisa. Ngokubhaliswa, udinga ukuletha ipasipoti yakho, inqubomgomo, ikhadi le-SNILS, isitatimende.
Usizo olukhethekile lunikezwa emitholampilo ye-endocrinology, ezibhedlela zesifunda nezedolobha. Emadolobheni amakhulu, kusebenza izikhungo ezikhethekile zesifo sikashukela nemitholampilo yama-multidisciplinary. Ngokungezelela kwabanesifo sikashukela, odokotela bezazi ezihlukile bababonisana: izazi zokudla, odokotela abahlinza imithambo, kanye nabezokwelapha, abasebenza ngokuzala kanye nezakhi zofuzo.
Ngokuvamile, iziguli ezinesifo sikashukela ziba nenkinga ejwayelekile - unyawo lwesifo sikashukela.
Lapho kuvela izibonakaliso zokuqala zale nkinga esigulini, kuphakama umbuzo wokuthi udokotela ophatha unyawo lwesifo sikashukela uzisebenzisa kanjani, nokuthi yiziphi izindlela zokwelapha ezisetshenziswayo.
Ezimweni eziningi, unyawo lwesifo sikashukela luphathwa ngudokotela ozinze endocrin oye wenza izifundo ezikhethekile zokuelapha lesi sifo.
Umsebenzi kadokotela wokwelashwa konyawo lwesifo sikashukela ukwenza ukuhlolwa kwenhloso kwesiguli, kanye nokukhetha uhlobo olusezingeni elifanele lokwelashwa. Ngenqubo yokuxilongwa, udokotela uhlola izinga lomonakalo ohlelweni lwe-vascular, futhi akhombe nezimbangela eziba nomthelela ekwandeni kwezinkinga.
Imikhumbi ye-retina iyathinteka ngokushesha, ngakho-ke ukubonisana nodokotela wamehlo kuyadingeka ukuvimbela ukukhula kobumpumputhe.
Uchwepheshe olandelayo udokotela wezinzwa okwazi ukubona ukuthi ulahlekelwe yini futhi anikeze nemithi ekhethekile.
Ukulawula okugcwele emzimbeni womuntu onesifo sikashukela, ukubonisana kochwepheshe abahlobene kuyadingeka. Ngakho-ke, umzuzu obaluleke kakhulu kwinqubo yokwelapha noma yiluphi uhlobo lwalesi sifo ukudla. Kulokhu, i-dietitan izosiza.
Ngeke nje akufundise ukuthi ulawule ngokufanele futhi ngokuphelele ukusetshenziswa kwama-carbohydrate, kodwa futhi athuthukise nokudla okuzokuvumela ukuthi uguqule isisindo. Njengoba wazi, lokhu kusebenza ezigulini ezinesifo sikashukela esinga-insulin.
Kumele futhi kukhunjulwe ukuthi ngokuqhubeka kwesikhathi eside, ikakhulukazi ngokubola, isifo sikashukela sivusa izinkinga eziningi. Kulokhu, unake iqiniso lokuthi:
umnyombo wezinkinga ukuphambuka emsebenzini wemikhumbi emincane (i-arterioles, capillaries), ebizwa ngokuthi yi-microangiopathy.Ngaphezu kwalokho, imithambo emikhulu ibuye ihlupheke - lokhu kuyi-macroangiopathy (atherosulinosis),
ukunakwa okukhethekile kukhokhwe ku-pathology ye-neva system (neuropathy),
ngenxa yalokho, izicubu zomzimba, ikakhulukazi izitho zomzimba, zihlushwa ukushoda kwegazi,
Izilonda ezinamaqhuqhuva ziyakhiwa, esikhathini eside isikhathi ukulimala okuncane akuphilisi. Konke lokhu kuphathwa ngudokotela ohlinzayo kuphela.
Ezimweni ezinzima kakhulu, kuyadingeka ukunquma izindawo ezithintekile, izingxenye zemilenze. Ngokuvamile lezi iminwe noma izinyawo, ezihambisana nokubonakala kwezindawo ze-necrosis. Unalokhu engqondweni, kunconywa kakhulu ukuthi ufune ukwesekwa sikashukela nosizo lochwepheshe ngokushesha okukhulu.
Olunye uphawu lwe-microangiopathy yi-retinopathy yesifo sikashukela, okuyi-retinal pathology. Ngokuqhubeka kwesifo, umuntu onesifo sikashukela angaba nobumpumputhe. Ukuxilongwa okufika ngesikhathi kanye nokulungiswa okufanele kokulashwa, kunconywa ukubonisana njalo nodokotela wezifo zamehlo.
Ngabe ngidinga ukuhlolwa kudokotela wami?
Asikho isidingo sokuzivivinya ngokwakho kusenesikhathi. Udokotela ohambelayo uqobo uzonikeza izivivinyo ezidingekayo, kuye ngezikhalazo, isithombe somtholampilo kanye nemiphumela yokwelashwa. Izifundo eziphoqelekile yilezi:
Lokhu ubuncane obudingekayo. Uchwepheshe angabeka izivivinyo ezingezekile. Uma uhlela ukwenza ukuhlolwa kwe-Ultra, kufanele ube no-diaper nawe.
Ubani okufanele ahlolwe uma kutholakala ukuthi isifo sitholakele
Lesi sifo sihlukaniswe ngamazinga amane obunzima. Ekuqaleni, inkomba yokuqukethwe kwe-glycemic icatshangelwa lapha. Ukuthola indlela efanele yokuxilongwa, udokotela uthola ukubaluleka okukhulu kwizinkinga ezihambisana nalesi sifo.
Isifo seBanga lesi-4 sibeka ingozi enkulu empilweni yeziguli. Kungavusa amaconsi okucindezela nobuhlungu emilenzeni. Ukuvimbela ubunzima, kumele kulandelwe zonke izincomo zikadokotela olapha lesi sifo.
Isikhathi eside, ama-endocrinologists enza izifundo zemitholampilo nokujula ukuthola izimbangela zangempela zesifo sikashukela nezinye izifo zezinhlelo ze-endocrine. Ngaphezu kwalokho, bakha izindlela zanamuhla zokwelapha, ukuxilonga nokuvikela izifo.
Besebenzisa imiphumela etholakele, ochwepheshe be-endocrinology bethula izindlela zakamuva zezokwelapha nezidakamizwa. Njengomthetho, ngokungeziwe ekwelashweni okuyinhloko kwezidakamizwa sikashukela, ukudla okuthile kubekelwe ukusiza ukuqeda lokhu kugula.
Njengomthetho, isifo sikashukela sihambisana nomuntu impilo yakhe yonke. Lesi yisikhathi eside, ngakho-ke inhloso enkulu ukukhetha indlela engcono kakhulu yokwelashwa efanele isiguli esithile.
Udokotela ufaka imishanguzo edingekayo, izifundo zokwelashwa ngevithamini, izincomo zokudla nokuzivocavoca umzimba. Into esemqoka ukungakhohlwa ukuthi ukuvakasha ngokufika kudokotela onolwazi kusiza ukuvimba imiphumela engathandeki, ngoba kulula kakhulu kunokulapha lesi sifo uqobo. Ngakho-ke, isiguli ngasinye kufanele sithinte uchwepheshe ngesikhathi.
Uma isiguli kufanele sithintane nodokotela wokuqala we-endocrinologist, khona-ke sizobe sithola ukwamukela isikhathi eside ngemibuzo, ukuhlolwa kanye nokuqokwa kwezifundo eziningi. Ngokulandelayo, kutholwa isifo bese kunikezwa ukwelashwa.
Uhlobo lwe-1 luphathwa nge-insulin ngomjovo, kuthi owesibili, kukhethwe izidakamizwa ezinciphisa ushukela. Uma, ngenxa yezinkinga ezikhona, isiguli sikhubazeka isifo sikashukela, singathola imishanguzo mahhala ngomuthi okhethekile.
Lapho ukwelashwa kwe-hypoglycemic kukhethwe kahle, futhi i-glucose isondele kokujwayelekile noma kungaphansi kwemikhawulo yayo, iziguli ziyaqhubeka nokubhekwa kudokotela wazo wesifunda, zibhekisa ku-endocrinologist kuphela ngesikhathi sokuvakasha okuhleliwe noma ezimweni eziphuthumayo. Ukuqapha ukuguquguquka kwamazinga kashukela nakho kwenziwa ngumelaphi.
Lapho ubuzwa ukuthi yimuphi udokotela obandakanyekayo ekwelashweni kwesifo sikashukela, impendulo akuyona engasho lutho. Lokho wukuthi, hhayi kuphela i-endocrinologist ene-Therapist ezokubheka uma ngabe ukuqinisekiswa kuqinisekisiwe.
Enye yezinhloso eziphambili ukuvikela izingqinamba - ngakho-ke, ukubonisana nodokotela wezifo zamehlo, owokuhlinza izifo zezinzwa, udokotela wezifo zenhliziyo nabanye odokotela nakho kungabekwa. Uma kuzodingeka ukuthuthukisa ukwelashwa ngamakhambi, i-phytotherapist izobhekana nalolu daba.
Umehluko kwabesilisa nabesifazane, izingane kanye nabantu abadala?
Uchwepheshe wenza isiphetho ngemiphumela yokuhlolwa kwegazi (kuhlolwa izinga le-glucose). Kaningi, lokhu kugula kutholakala ngengozi lapho isiguli sihlolwa ngokuhleliwe.
Kwezinye izikhathi, kwenziwa isinqumo sokuya esibhedlela ngenxa yempilo engeyinhle. I-Therapist ayiphathi i-glycemia. Ukulwa nalesi sifo, udinga ukuxhumana nomunye uchwepheshe. Ukwelashwa kwesifo sikashukela kwenziwa yi-endocrinologist.
Ubuye alawule isiguli. Ngokusekelwe emiphumeleni yokuhlaziywa, udokotela ohambayo uhlola ukuthi lesi sifo silingakanani bese enquma ukwelashwa okuyikho, ukuhlanganisa nokudla. Uma isifo sikashukela sinika ubunzima kwezinye izitho zomzimba, isiguli kufanele sihambele ochwepheshe abalandelayo: udokotela wamathambo, nodokotela wezifo zamehlo, udokotela ohlinza izinzwa noma udokotela ohlinza ngemithambo.
Ngokuhambisana nesiphetho ngesimo sezempilo, i-endocrinologist inquma ngokuqokwa kwezidakamizwa ezisizayo. Ngenxa yabo, ukusebenza okuzinzile komzimba kuyagcinwa.
Yimiphi imibuzo ongayibuza udokotela?
Ukuthola isikhathi sokuhlangana nochwepheshe ofanele, zama ukuthola imininingwane eminingi ukuthi lesi sifo singayithinta kanjani indlela yakho yokuphila. Zizwe ukhululekile ukubuza imibuzo. Okusemqoka yile:
Uhlobo luni lokudla okufanele lulandelwe?
Yini okufanele yenziwe ukuthuthukiswa kwesimo esibuhlungu?
Ngabe udinga kangaki ukulawula ushukela?
Udokotela we-endocrinologist uzosiza kanjani ngesifo sikashukela?
Thola isifo sikashukela kungaba kuphela udokotela (udokotela womndeni, isifunda) ngokwemiphumela yokuhlolwa kwegazi kwe-glucose. Lokhu kugula kungambulwa ngengozi, ngesikhathi sokuhlolwa okujwayelekile noma izimpawu ezithile.
I-Therapist ayiphathi i-glycemia. Ukulwa nalesi sifo, kuzofanele uye kwenye uchwepheshe ukuze uthole usizo. Manje yimuphi udokotela ophatha isifo sikashukela? Le yi-endocrinologist. Kuyisipesheli sakhe ukulawula iziguli ezinesifo sikashukela.
Ngokwemiphumela yokuhlolwa, udokotela oholayo uzohlola izinga lalesi sifo futhi anikeze ukwelashwa okuyikho ngokuhambisana nokudla. Esimweni lapho isifo sikashukela sinika ubunzima kwezinye izitho, isiguli sidinga ukuvakashela ochwepheshe abancanyana:
udokotela ohlinza imithambo.
Ngokwesiphetho sabo ngesimo sempilo yezitho ezithintekayo, i-endocrinologist inquma ngokuqokwa kwezidakamizwa ezingezekile ukuze kusebenze ukusebenza okujwayelekile komzimba.
I-Endocrinologists ayiphathi kuphela uhlobo I nesifo sikashukela II, kodwa nezinye izifo, kubandakanya:
i-oncology yohlelo lwe-endocrine,
Izifo eziningi kangaka azikwazi ukubhekana ne-endocrinologist eyodwa. Ngakho-ke, i-endocrinology ihlukaniswe ngezifundo ezincanyana.
Udokotela ohlinzayo we-Endocrinologist. Ukusebenzisana nesifo sikashukela. Uma inkinga ivela ngesimo sezilonda, i-gangrene, inquma ukuthi ihlinzwe noma cha.
Isazi sofuzo sendalo. Udokotela obheka izinkinga zokuthola ifa. Lokhu sikashukela, i-dwarfism noma ukukhula okukhulu.
Isazi se-Endocrinologist-diabetesologist. Lo dokotela uzokusiza ukhethe ukudla okufanelekile kanye nokudla kohlobo lwe-I, thayipha isifo sikashukela II.
Udokotela we-endocrinologist-gynecologist uxazulula inkinga yokungazali kowesilisa nowesifazane.
I-Endocrinologist-thyroidologist. Uchwepheshe obambe iqhaza ekuxilongeni nasekwelashweni kwezifo ze-thyroid.
I-endocrinologist yezingane. Uchwepheshe we-pathology yezindlala ze-endocrine. Ukusebenzisana nezinkinga zokukhula nokukhula kwezingane.
Isigaba esinqunyelwe ngokukhethekile sivumela ongoti ukuthi bangene ngokujulile ohlotsheni lwesifo esisodwa, ngaleyo ndlela babe nekhono ngokwengeziwe ezindabeni zabo.
Ngingabiza udokotela ophatha isifo sikashukela ekhaya?
Ukuvakasha kwe-endocrinologist endlini kwenziwa ezimweni lapho kudingekile ukubonisana noma isiphetho, uma isiguli singakwazi ukufinyelela ngokuzimele emtholampilo (ukunqunywa ngenxa yokuqina komlenze ophansi).
Emitholampilo wesifunda, lapho kungekho khona i-endocrinologist, umbuzo wokuthi "uluhlobo luni udokotela ophatha isifo sikashukela" aluveli, ngoba yonke imithwalo yemfanelo yezokuphatha ingena emahlombe kadokotela wesifunda. Kepha, njengomthetho, abelaphi bazama ukuthumela iziguli ezinjengalezi ukuba zithintane esikhungweni sesifunda.
Ungabhekana kanjani nesifo sikashukela
Isifo sikashukela i-mellitus sezinhlobo ezimbili, mina no-II. Zihlukile ngokuthatha i-insulin.
Isifo sikashukela sohlobo 2 silula ukwedlula esokuqala futhi sibhekwa njengezimele i-insulin. Ukuzwile ukutholwa okunjalo, ungalahli ithemba. Ngeke elaphe ngokuphelele, kepha kungenzeka ukuthi kuqhubeke ukulawulwa kwesifo kulawulwa.
Ukudla kuyindlela eyinhloko yokwelashwa. Ukwenqatshwa kokudla okumnandi, okunamafutha, okunezipayisi kanye nokufudumele kuzovumela ukugcina amazinga kashukela ngaphakathi kwemikhawulo eyamukelekayo. Inzuzo kufanele inikezwe imifino, inyama ebusayo, ujusi ngaphandle koshukela. Hlobisa nge-porridge yokuhlobisa, kepha ungaphuthelwa nakho.
Kungenzeka ukuthi uthathe imishanguzo ngokuhambisana nokudla ukuze wenze amazinga kashukela ashukela abe ngokwejwayelekile.
Kubalulekile ukubhekisisa impilo yakho njalo nokwenza izivivinyo ngesikhathi. Ngokuhambisana nezincomo ezinjalo, ungabona ushintsho kuzinkomba zeshukela futhi ushintshe ngesikhathi indlela yokwelashwa.
Uhlobo 1 sikashukela lubizwa ngokuthi yi-insulin-kuncike. Ushukela wegazi uphezulu. Ukudla okukodwa akubanciphisi, ngakho-ke i-insulin iyabekwa. Umthamo nenombolo yokuphatha kungabekwa kuphela yi-endocrinologist.
Kunconywa ukuya ku-Therapist ekushintsheni kokuqala kwesimo esejwayelekile. Kunconywa ngokuqinile ukuthi:
ngemuva kokuqoqa i-anamnesis, zonke izinqubo ezidingekayo zokuxilonga ziyenziwa (ukuhlolwa kwelabhoratri ushukela, ukuhlolwa komchamo, ukumelana ne-insulin,
Ngokusekelwa kulokhu, kunikezwa izincomo zokwelashwa nokuhambela kodokotela abagxile kakhulu,
Kubalulekile ukubonana nodokotela wezokwelapha ngokushesha okusemandleni, ngoba lapho umuntu enza isimo sakhe esibi, isimo esibucayi kumuntu. Zigcwele imiphumela emibi yesifo sikashukela.
Ubungcweti bakhe bubanzi ngandlela thile kunempi yokulwa nezifo zokuphefumula ezinobunzima kanye nokunye ukubanda. Lo dokotela kufanele abonwe uma unezikhalazo ngesimo esejwayelekile.
Ixilonga isifo senhliziyo nemithambo yegazi - uma ngabe unesifo esinjalo, umsebenzi waso, ngokubambisana nesazi sezinhliziyo, ukuqapha isimo sakho,
Gada iziguli ezine-anemia, kanye nalabo ababhekene nokuphazamiseka kokugaya kanye nokugaya ukudla,
Uma kungazelelwe uqale ukudakwa, noma ukwephulwa kwemisebenzi yokuphefumula emzimbeni - umsebenzi owelulekayo ukukusiza.
Lochwepheshe wenza eminye imisebenzi:
Iyafundisa. Uma umuntu ezizwa engasebenzi, futhi engaqondi ukuthi kuxhumene ngani - lokhu kuyasebenza nasezimpawu zesifo sikashukela, ezingaba yizimpawu nezinye izifo - udokotela kufanele abonane futhi ahlelele ukuhlolwa,
Ukusatshalaliswa. Uma izikhalazo zakho zithize futhi zihlobene nokukhethekile kwabanye odokotela abakhethekile, uzokutshela ukuthi ngubani okufanele uxhumane naye,
Ukulawula. Uma kukhona iziguli endaweni kadokotela enezifo ezingamahlalakhona, noma abanesifo sikashukela esifanayo, unesibopho sokubheka isimo sabo.